Forum Malagasy :: Forum amin'ny teny gasy
Forum Malagasy Index du Forum Resaka Hafa INFORMATIKA - INFORMATIQUE Forum amin'ny teny gasy
Sujet du message: Forum amin'ny teny gasy
Resaka efa natsipiko kely tary amin'ny wanadoo,
Misy locale mg an'ny PhpBB izay ato:
Ahoana moa raha atao teny gasy koa ny forum?
Sa ahoana hoy nareo?
Tokony ho azo atao ihany ilay izy fa ny fanotaniako kely mikasika ilay theme: misy langue mg tonga dia importé-na moa izany ilay izy ary afaka ampiasaina @ theme rehetra?
Za aloha tsy dia mahafantatra an'ilay phpbb, fa raha ny fahazoako azy dia tsy misy ifandraisany amin'ny theme io.
Adika ao amin'ny dossier language, dia amboarina ao amin'ny config.
Toa mety ho sarotra be izany...
sarotra be zany amin'ny fandikan-teny